NIU U-Series U1 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါကို U ထုတ်လုပ်မှုမရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံကို UQi ဖြင့်အစားထိုးသည်။
အဆိုပါ NIU ဦး-စီးရီး၏ယခင် CTO ဖြစ်သူကတည်ထောင်ကြောင်းတစ်ခုဆန်းသစ်တရုတ်ကုမ္ပဏီအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒုတိယမျိုးဆက်လျှပ်စစ်စမတ် Scooter ဖြစ်ပါတယ် ဘိုင်ဒူ (တရုတ်က Google) နှင့် Microsoft ၏ဟောင်းတစ်ဦးဝန်ထမ်း။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်လျှပ်စစ် Scooter ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ U1 နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု. ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းနှင့်မော်တာအပါအဝင် Scooter အားလုံးစိတျအပိုငျးမြို့အသုံးပြုမှုများအတွက် optimized နှင့် 150,000 မြင်းစီးသူရဲများနှင့် NIU ရဲ့လူကြိုက်များ N-စီးရီးနှင့် M-စီးရီးဆိုင်ကယ်များထံမှအသုံးပြုမှုအချက်အလက်များ၏ထက်ပိုမို 1 သန်းကီလိုမီတာအတူလေ့လာမှု၏အခြေခံပေါ်မှာဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါရလဒ်ရည်ရွယ်ချက်-built မြို့အဘို့ဖြစ်၏တဲ့ Scooter ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ခြွင်းချက်ခွန်အားနှင့်အတူသယ်မည့်အိတ်စွမ်းရည်များကိုတည်ဆောက်ထားသောအဝတ်အချည်းစည်းဘောင်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ torsonial ကျောမှုနှင့်အကောင်းဆုံးမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံရရှိလာတဲ့အနိမ့် longitudinal တောင့်တင်းအတူ Scooter ပေးပါသည်။
အဆိုပါ U1 92,6% ထိရောက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် 1500 ဝပ် optimized Bosch ရဲ့လျှပ်စစ်မော်တာနှင့်အတူပေးအပ်သည်။ အဆိုပါမော်တာထုံးစံ NIU နှင့်အကြားပူးပေါင်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖန်တီးလိုက်ပါပြီ Bosch ရဲ့ NIU ရဲ့လေ့လာမှုဒေတာကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါမော်တာ Anti-ခိုးယူအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမယ့်မော်တာ-သော့ခတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေနဲ့တိုးမြှင့်ထားသည်။
အဆိုပါတက်စလာမော်ဒယ်အက်စ်အတွက်ဘက်ထရီအဆိုပါဘက်ထရီ 50km တစ်အကွာအဝေးသည်အတိုင်း U1 တူညီတဲ့အမျိုးအစား, Panasonic က 18650 lithium-ion ဘက်ထရီနှင့်အတူပေးအပ်သည်။ NIU ဘက်ထရီအပေါ်2နှစ်အာမခံပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ U1 50 မီတာအကွာအဝေးကနေ Scooter lock နှင့်သော့ဖွင့်ဖို့ဖွတဲ့ကြိုးမဲ့သော့ချက်နှင့်အတူပေးအပ်သည်။
အဆိုပါ Scooter Anti-ခိုးယူမြှင့်တင်ရန် 6-ဝင်ရိုးတန်းရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူပေးအပ်သည်။ အတူတူဂျီပီအက်စ်နှင့်အတူစနစ်တိကျစွာ Scooter ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလှုပ်ရှားမှု detect နှင့်ခိုးယူတားဆီးပေးနိုင်သည်။
တက်စလာကားများကဲ့သို့ပင် Scooter စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် diagnoses ဟာ Scooter ရဲ့ကျန်းမာရေးကို real-time နှင့်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ Scooter အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကျော်-the-air update အတွက်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမိုဃ်းတိမ်ချိတ်ဆက် controller ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
တရုတ်မှာ Scooter ဘက်ထရီပါဝါထဲကပြေးသည့်အခါဆက်လက်ကားမောင်းသူကို enable ပြုလုပ် mountable အရေးပေါ်စက်ဘီးခြေနင်းနှင့်အတူပေးအပ်သည်။ YouTube ပေါ်မှာကြည့်ရန်
အဆိုပါ U1 ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှအပိုအာရုံစိုက်မှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ Scooter ရုံ 1.4 မီတာတစ်ဘရိတ်အကွာအဝေးတစ်ခု EBS ဘရိတ်စနစ်ဖြင့် equiped ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်အားလည်းတစ်ဦးအတွက်ထောက်ပံ့ Kinetic Energy က Recovery ကို System ကို ဘရိတ်ကနေရသောစွမ်းအင်အတွက် (KERS) သို့မဟုတ်ရုပ်ပျိုဘရိတ်ဘက်ထရီမှပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ U1 headlamp ဆီလီကွန် LED နည်းပညာကိုအပေါ်တစ်ဦး State-Of-The-Art ဆီလီကွန်အသုံးပြုသည်။ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချထားစဉ်ဤနည်းပညာကို သာ. ကြီးမြတ် luminosity Output ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီမီးတစ်ဦးအဆင်ပြေမြင်သာသောလယ်များအတွက်အနိမ့်နှင့်မြင့်မားသော-ထုပ်များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ U1 လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်ယာဉ်မောင်းညမှာသငျသညျမွငျနိုငျသေချာစေရန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက် Scooter ပတ်လည် 360 °အလင်း Halo ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်, U1 အလိုအလျောက်အလှည့် indicator light ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ U1 ကိုလည်းအန္တရာယ်မီးခွက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ U1 တစ်စမတ်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်တဲ့စစ်မှန်တဲ့စမတ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းစီးဘက်ထရီစောင့်ကြည့်မှုကနေဂျီပီအက်စ်မှအရာအားလုံးသည် NIU app ကို U1 ၏နေရာတွင်နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ကားမောင်းသူစောင့်ရှောက်။ ဒီ app ဟာ Scooter ပြောင်းရွှေ့သောအခါယာဉ်မောင်းကသတိပေးထားတဲ့ anti-theft system ထဲမှာပေးပါသည်။ GPS စနစ်နှင့်အတူကအစစ်အမှန်အချိန်အတွက် Scooter ရဲ့အနေအထားကိုခြေရာခံဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ U1 ခရုဇ်ထိန်းချုပ်မှု, ယာဉ်ရပ်နားလက်ထောက်တစ်ဦးအာရုံခံကိရိယာကိုအခြေခံပြီးဘေးကင်းလုံခြုံရေးတပ်လှန့်စနစ်နှင့်ပိုပြီးစမတ် features တွေရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter မှောင်မိုက်ထဲမှာ Scooter နေရာချထားရန်နှင့် 50 မီတာမှအကွာအဝေးအထိကနေမော်တာ-သော့ခတ်သော့ဖွင့်ရန်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်။
အဆိုပါ U1 အများအပြားအရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်။